Guadalest, waa magaalo riyadeed oo ka tirsan gobolka Alicante | Wararka Safarka
Luis Martinez | | Getaways, Espana
Guadalest waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan uguna quruxda badan magaalooyinka Gobolka Alicante. Waxay ku taal gobolka Marina Baja, oo caasimadiisu tahay Villajoyosa, laakiin waxaa ka maqan xeeb. Taas bedelkeeda, waxay ku taal buur oo ku wareegsan meelaha ugu dhaadheer ee aagga sida Sierra de Aitana mawjad ka mid ah Xortà ah.
Lagu dhawaaqay Dhismaha Taariikh-Faneed 1974, Guadalest sidoo kale waa qayb ka mid ah shabakadda Magaalooyinka ugu quruxda badan Spain. Waxay ku badan tahay qalcaddeeda cajiibka ah, dhex mushaaxaya jidadkeeda cidhiidhiga ah ee guryaha cad iyo booqashada matxafyadeeda ayaa ku siin doona khibrad gaar ah. Hadaad rabto inaad sifiican wax u ogaato The Castell de Guadalest, maadaama magaaladan loogu magac daray runti, waxaan kugu dhiirinaynaa inaad sii wadato akhriska.
1 Maxaa lagu arkaa Guadalest
1.1 Qasriga Guadalest
1.2 Kaniisadda Our Lady of Assumption
1.3 Guriga Orduña
1.5 Matxafyada Guadalest
2 Waxa laga qabanayo magaalada Alicante
3 Waxa lagu cuno Guadalest
4 Sida loo tago magaalada
5 Waa maxay waqtiga ugu fiican ee la booqdo Guadalest
Maxaa lagu arkaa Guadalest
Marka laga reebo ku raaxeysiga aragtiyaha cajiibka ah ee ay bixiso aragtida, Guadalest waxaad ku leedahay dhaxal taariikhi ah oo xiiso leh iyo suurtogalnimada inaad waxqabadyo kale qabato. Waxaan ku tusinaynaa waxa lagu arko magaalada Alicante.
Sidoo kale loo yaqaan qalcaddii san jose, waa qalcaddi hore ee muslimiinta laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad. Waxaa laga taagay qaybta ugu sareysa magaalada, waxay lahayd muhiimad weyn oo istiraatiiji ah intii lagu jiray qarniyadii dhexe. Si kastaba ha noqotee, laba dhulgariir iyo isku dhacyo sida Dagaalkii Xorriyadda ayaa sababay xaaladdiisa hadda, ku dhowaad burbur. Hase yeeshee, wali waad booqan kartaa meydkiisa.
Kaniisadda Our Lady of Assumption
Waxaa la dhisay qarnigii XNUMX-aad kadib xigashooyinkii baroqueWaxay sidoo kale la kulantay waxyeelo ku qasabtay in dib loo soo celiyo 1962 iyadoo laga saaray qubbadkeedii iyo transept. Gudaha gudihiisa waxaa ku yaal qiimo qaali ah meesha allabariga waxaa abuuray golaha wasiirada Jose Maria Moya iyo rinjiile David Wadaad. Sida magaca kaniisaddu tilmaamayso, waxay u taagan tahay dhawaaq iyo nolosha Ciise Masiix.
Waa dhismaha ugu weyn ee sharafta leh ee Guadalest. Waxaa la dhisay ka dib dhulgariirkii 1644 waxaana loogu magac daray qoyska Orduña, oo xukumayay magaalada seddex boqol oo sano. Hada waa xarunta a Matxafka dowladda hoose Waxay soo bandhigeysaa alaab guri qarnigii XNUMXaad, rinjiyeyntii qarnigii XNUMXaad, uruurinta dhoobada, khariidado, sawirro guryo iyo waxyaabo kale oo badan.
Si xiiso leh, dabaqa hoose ee Guadalest Town Hall waxaad sidoo kale booqan kartaa xabsi qarnigii XNUMX-aad oo noo horseedaya inaan kuu sheegno madxafyada maxalliga ah maxaa yeelay waxaa jira mid si hufan loogu heellan yahay aaladaha jirdilka.
Iyada oo ay weheliso quruxda weyn ee magaaladan Alicante, waad layaabi doontaa qadarka matxafyada xiisaha leh loo soo bandhigay booqdaha. Waxaan horey u soo sheegnay Sooyaalka Taariikhda, oo leh walxaha dhibta leh ee jirdilka iyo sidoo kale tan Casa Orduña. Laakiin waxaa jira kuwo kale oo xitaa ka sii yaab badan.
Waa kiiska Matxafka microgiant, taas oo aad ku arki karto thumbnails cajiib ah. Tusaale ahaan, Goya 'Dilkii Bishii Meey Labaad' ee badar bariis ah, dibin daabyo laga dhisay madaxa biinanka ama Taallada Xorriyadda isha irbadda dhexdeeda. Dhammaantood waa curinta farshaxanka Manuel Ussa, oo loo tixgeliyey mid ka mid ah microminiaturistyada ugu fiican adduunka.
Wax yar oo xiiso leh ayaa ah Matxafka Beytlaxam iyo Dollhouses taas oo aad ku arki karto waxyaabo badan oo carruurtu ku ciyaaraan iyo muuqaal dhalasho oo dabiici ah. Islana waa la dhihi karaa madxafka cusbada iyo basbaasleyda, oo ka kooban in ka badan labaatan kun oo gogo ', qaarkoodna ay yihiin 1800 sano ka hor.
Dhinaca kale, si siman oo qurux badan ayaa ah Matxafka qowmiyadeed, kaas oo dib u soo nooleeya nolosha dadka deggan dooxada Guadalest ee waagii hore. Dharka caadiga ah, alaabta guriga iyo maacuunta maalin kasta la isticmaalo ayaa ka kooban walxaha lagu soo bandhigay meeshan.
Gudaha guriga Orduña
Ugu dambeyntii, Ururinta Matxafka Gawaarida Taariikhda Waxay ku tusinaysaa 140 mootooyin iyo gawaarida guridda ee qolka quruxda badan. Waxaad sidoo kale halkaan ka heli doontaa qaybo badan oo hore oo la soo dhaafay sida mashiinnada harqaanka, taleefannada, raadiyeyaasha iyo xitaa kuwa sameeya kafeega.
Waxa laga qabanayo magaalada Alicante
Booqashada taalooyinkeeda iyo matxafyadeeda ka sokow, magaalada Alicante waa meel ku habboon trekking. Dhowr waddo ayaa ka bilaabma jidadkeeda. Tusaale ahaan, midka kor u kaca Shirka Xortà isagoo maraya Cerro de los Parados. Ama sidoo kale midka keena Qalcadda Castells.
Labada dariiqba waxay wadaagaan safar ilaa Loma del Blocón, laakiin markaa qofku wuxuu u sii socdaa xagga Isha isha, halka kan kale uu gaarayo Castell de Castells ee aan soo sheegnay, halkaas oo aad ka arki karto Aagga Arcs iyo sawirada godka Pla de Petracos.
Waxa lagu cuno Guadalest
Wadooyinkan socodka dheer kadib, rabitaankaaga cuntada wuu shaqeyn doonaa. Magaalada Beesha Valencian waxaad ku leedahay maqaayado ku siiya cuntooyinkooda caadiga ah.
Qaar ka mid ah ayaa ah bariis leh iniin iyo digirah basbaas cufan, bakayle cali oli iyo Khudaarta la dubay. Xoog badan ayaa ah aad bay u xun tahay, oo leh qamadi, hilib doofaar, baradhada, basasha, yaanyada, yamaarug iyo digir, dhamaantood waxaa lagu kariyey dher dhaqameed.
Qeyb ahaan, mincho waa nooc ka mid ah pizza-da oo leh khudaar, kalluun iyo qajaar, halka kubbadaha galleyda waxay u egyihiin kubbadaha hilibka, in kastoo aysan hilib lahayn laakiin baradhada la kariyey, rootiga iyo ukunta.
Sida loo tago magaalada
In kasta oo ay jirto khadka baska gaadho magaalada Alicante, sida ugu fiican ee lagu tago waa baabuur. Hadaad ka safarto Benidorm ama Alcoy iyo Cocentaina, wadada ay tahay inaad qaaddo waa tan CV-70. Dhanka kale, haddii aad ka safarto Altea, wadada ugu fiican ayaa ah CV-755.
Waa maxay waqtiga ugu fiican ee la booqdo Guadalest
Aagga Guadalest wuxuu leeyahay cimilo ka mid ah Badda Dhexe, oo leh jiilaal khafiif ah iyo xagaa kulul. Si kastaba ha noqotee, maaddaama magaaladu ay tahay meel ku dhow lix boqol oo mitir oo ay ku wareegsan tahay buuro, cimiladu way ka yara duwan tahay. Sidaa darteed, jiilaalkeedu waa ka qabowyahay xagaaguna aad uga fiican xaga kuleylka.
Sidaa darteed, waqtiga ugu fiican ee aad booqan karto Guadalest waa xagaaga. Intaas waxaa sii dheer, bartamihii bishii Ogosto iyaga xafladaha sharfidda Bikrood male, oo ay magaaladu ka sii xiiso badan tahay.
Gabagabadii, Guadelest wax badan buu kuu soo bandhigayaa. Waa magaalo qurux badan oo ku dul taal buur ayna ku badan yihiin qalcaddeeda waxayna leedahay matxafyo aad u xiiso badan iyo muuqaal qurxoon. Haddii waxaas oo dhan aad ku darto gastronomy aad u fiican, waxaad leedahay dhammaan astaamaha ka dhigaya booqashadaada mid cajiiba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways » Guadelest
Isha wabiga Mundo